i-cAsita La CasCarona - I-Airbnb
i-cAsita La CasCarona
I-La Casita Rural "La Cascarona" yindlu encinci yasedolophini ehlaziyiweyo ukuze uchithe iintsuku ezintle apho. Uphahla olwenziwe ngamatye kunye nodonga lwe-adobe. Isasazwa kwimigangatho emibini,enendawo yokungena yezitepsi ngaphakathi nangaphandle.
Umgangatho wokuqala: igumbi lokulala, ibhedi elala abantu ababini kunye nendlu yangasese eneshawa. Ukuze igumbi libe tofotofo ngakumbi, linendawo yomlilo entle ehonjiswe kakuhle ebonisa ubushushu kodwa ingatshayi. Umgangatho wesibini: Ikhitshi elinento yonke. Igumbi lokuhlala, i-TV kunye nomatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu.
Njengayo nayiphi na indlu elungisiweyo,kukho izinto ezincinci ezingenakutshintshwa kwaye enye yazo zizitepsi ezidibanisa indlu ukusuka ngaphakathi phakathi kwemigangatho emibini. Zincinci. Kodwa ngaphandle ungafikelela kuyo ngaphandle kweengxaki.
Ibhedi yi-1.75 cm enomatrasi owenziwe nge-memory foam nemiqamelo.
Izinto zebhedi neetawuli ziyafumaneka.
Ikhitshi linento yonke.
Ayikho indawo yokubasa umlilo weenkuni, yindawo yomlilo ehonjisiweyo kodwa isebenza njengento eyenza kufudumale.
I-El Gasco yindawo entle nesincinci yokuqeshisa ekwindawo enzulu ye-Las Hurdes.
Ulwalamano neendwendwe luyabonakala, sizihoya ngokwethu size sizinike yonke inkcazelo eziyidingayo ukuze zikonwabele ukuhlala kwazo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- El Gasco